﻿ ‘सीप सिक्नुस्, रोजगारी नगरपालिकाले खोजिदिन्छ’ : उपमेयर
‘सीप सिक्नुस्, रोजगारी नगरपालिकाले खोजिदिन्छ’ : उपमेयर
शनिबार ०४, साउन २०७६
इटहरी । युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न आफूहरु सक्रिय रहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताएकी छिन् ।
उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा नेप्ली मिडिया प्रालिले आयोजना गरेको एक महिने सेक्रेटरी तथा रिसेप्सनिष्ट तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले नगरपालिकाले नयाँ नयाँ सीपमुलक तालिमहरुको आयोजना गरिरहेकोसमेत उनले बताएकी छिन् । ‘पुराना शैलीका तालिमहरुको साटो नयाँ सीप र बजार मागअनुसारका तालिममा हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो तालिमले पनि तपाईहरुलाई रोजगारको लागि सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
उनकाअनुसार संघीय सरकारको योजनाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना रोजगार संयोजक नियुक्त भएको र अब स्थानिय तहले नै बेरोजगारलाई रोजगारमा लगाइदिने काम गर्नेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै इटहरी वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष हेमानन्द दाहाल र इटहरी वडा नं. १९ का वडाध्यक्ष श्रीनारायण चौधरीले तालिमले व्यवहारिक सीप सिकाएको भन्दै रोजगारमा संलग्न गराउन सबैको प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सामाजिक शाखा प्रमुख भोजकला दवाडी र माया राईकोसमेत उपस्थिती रहेको थियो ।
तालिममा इटहरीका विभिन्न वडाबाट २० जना युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिमअन्तर्गत व्यक्तित्व विकास, व्यवशायिक योजना, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न पक्षको बारेमा जानकारी दिइएको आयोजक नेप्ली मिडिया प्रालिका निर्देशक हिमाल दाहालले जानकारी दिए ।
नेप्लीले नेतृत्व विकास, उद्घोषण, भाषणलगायतका विभिन्न तालिमहरुका साथै सीप तथा क्षमता विकासका तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालयका साथै पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरुमा समेत पुगेर कार्यक्रम तथा तालिमहरु गर्ने गरेको दाहालले बताए ।